Banijya News | » रिलायन्स फाइनान्स कम्पनी विश्लेषण रिलायन्स फाइनान्स कम्पनी विश्लेषण – Banijya News
रिलायन्स फाइनान्स कम्पनी विश्लेषण
२८ मंसिर, २०७६, काठमाण्डौ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा रिलायन्स फाइनान्स कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ८३ करोड १ लाख छ । गत आर्थिक वर्षेको पहिलो त्रैमासमा रू. ७२ करोड ४३ लाख थियो । सो अवधिमा कम्पनीले १२ प्रतिशतले बोनस शेयर वितरण गरेपछि पूँजी वृद्धि भएको हो ।
रिजर्भ कोषमा रू. १५ करोड १७ लाख छुट्याएको छ । कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षेको पहिलो त्रैमासमा रू. ४ अर्ब २४ करोड निक्षेप संकलन गरेको छ भने रू. ३ अर्ब ७५ करोड कर्जा प्रवाह भएको हो । गत आर्थिक वर्षेको पहिलो त्रैमासको तुलनामा निक्षेप २० प्रतिशत र कर्जा प्रवाह १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । चालू आर्थिक वर्षेको पहिलो त्रैमासमा कम्पनी रू. १ करोड नोक्सानीमा रहेको छ ।
प्रतिशेयर आम्दानी रू. (४ दशमलव ८३) र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १२२ दशमलव ८५ छ । कम्पनीकोे ५० दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिन क्लोजिङ कालो मारुबोजु आकृति बनेको छ । यस्तो आकृतिले कम्पनीको शेयरमूल्य आगामी दिनमा घट्ने संकेत देखाउँछ । आरएसआई न्यूट्रल जोन ४९ दशमलव ३७ विन्दुमा छ । यसले शेयर खरीदविक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएशन १ दशमलव ०१ विन्दुमा छ ।
उतारचढाव सामान्य छ । यस्तो अवस्थामा जोखिम कम र प्रतिफल पनि कम हुने गर्दछ । त्यस्तै कम्पनीको मुभिङ एभरेजमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिएका छन् । हालको मूल्यरेखा दुवै रेखाभन्दा माथि छ ।